मेरो तेस्रो बच्चा जन्म
म लगभग 400 बर्षको भएँ, र अझै निर्णय गर्न सक्दिन कि म अझै बच्चालाई जन्म दिन चाहन्छु कि भनेर निर्णय गर्न सक्दिन। मसँग पहिले नै दुई बच्चाहरु छन्, र म निश्चितताको लागि भन्न सक्दछु कि केवल परी कथाहरूमा र इन्स्टाग्राममा यो सजिलो र सरल छ। यो सबै गर्भावस्थामा कसरी गर्भावस्थामा रहनेछ, आफ्नो स्वास्थ्य र भविष्यको बच्चा, डर र भन्नेको डर, तपाईं सामना गर्न सक्नुहुन्न जुन केहि गलत गर्नुहोस्। तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि बच्चाको जन्म भएको जीवन पनि त्यस्तो हुँदैन, तपाईं डराउनुहुनेछैन कि सबै कुरा सबै कुरा पूर्ण रूपमा काम गर्दैन र तुरुन्तै तपाईं भौतिक रूपमा परिवारलाई तान्न सक्नुहुन्न।
ले हराउने र भविष्यमा बगैंचा, मग्नहरू, स्कूल, संस्थान, संस्थान ... तपाईं गर्भावस्था परीक्षणको सकारात्मक परिणाम तुरून्त उत्पन्न हुन्छ। तर हुनसक्छ यो सबै मेरो भावनाहरू मात्र हो? मैले यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने निर्णय गरें, गर्भवती महिलाहरूलाई उनीहरूको जीवन स्थितिमा कसरी परिवर्तन भयो भनेर बुझ्नको लागि र उनीहरूले महसुस गरेको कुरा बुझ्न।
IRIN, MIRIN, महिना
मसँग एकदम ढिलो बच्चा छ। पहिलो बच्चा, लामो प्रतीक्षा म गर्भावस्था र बच्चा जन्मको लागि धेरै तयारी गर्दै थिएँ। भगवानलाई धन्यवाद चढाईयो। तर एकै साथ, जब उहाँ जन्मनुभयो, म बिल्कुलै यसलाई के गर्छौं भनेर बुझेन: कसरी सम्भव छ कि यो असम्भव छ भन्ने कुरा कसरी विकास गर्ने भनेर हेरौं भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। यस्तो असहायताले मलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्यो।
सबै प्रश्नहरू र एकीकृत गर्भावस्था सेवाहरू, डाक्टरमा रिसेप्शनका लागि प्रविष्टिहरूका लागि प्रविष्टिहरू तपाईंको फोन प्रविष्ट गर्न टेलिफोन सेट गर्न सक्दछ र हामी तपाईंलाई कल गर्दछौं:
रिसेप्शन (निरीक्षण, परामर्श)
हामीले उनको श्रीमान्सँग कहिल्यै सोचेका छैनौं जुन हामीसँग धेरै बच्चाहरू हुनेछन्, तर म यो कसरी के भयो भनेर भन्न सक्दिन। जब म हाम्रो पहिलो बच्चाको लागि कुर्दै छु, मेरो श्रीमान एक केटा हुनेछ भन्ने आशा गर्नुहुन्छ, तर आकर्षक भेरोनिका हुनतिर लागे। हामीले निराश भएनौं र निर्णय गरेनौं कि दोस्रो पटक छोरा निस्सन्देह देखा पर्नेछ, तर हाम्रो अद्भुत र मनमोहक हिलो जन्म भएको थियो। हामी जिद्दी छौं, आत्मसमर्पण गर्न र तेस्रो प्रयासमा निर्णय लिदैनौं। र अब, अन्तमा, पतिले यस्तो लामो-पर्खिने छोरा प्राप्त गरे र हाम्रो परिवार अझ परिचित छ!
केहि कारणले गर्दा मैले थोरै गर्वसायको बारेमा सोचेँ, तर म पूर्ण कार्यक्रममा आएकी थिइनँ, र यो बाहिर निस्किरहेको थियो। शब्द पहिले नै 400 हप्ता थियो।
महिला परामर्शमा अर्को स्वागतको लागि, डाक्टरले मलाई "गर्भावस्था 400--411 हप्ता" को निदानको साथ अस्पताल पठाए। म घर फर्कें, जो कुराहरू भेला भए, मेरो पतिबाट फर्किएन सम्म पर्खिए हामी प्रमोट अस्पतालमा समर्पण गर्न गयौं।
पेटमा सबै कुरा शान्त र शान्त थियो। प्राप्त विभागमा सबै सामान्य रूपमा सामान्य थियो: एक सर्वेक्षण, कागजातहरू भर्ने, निरीक्षण भर्नुहोस्, त्यसपछि प्याथोलजी विभागमा पठाइएको थियो।
<< p> यस समयमा मलाई धेरै पटक आमन्त्रित गरियो, तर उत्तर एक थियो: म दयालु छैन, नियमित तवरले ताल, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण। हो, तालिम गम्भीर थियो! रातमा, संकुचनहरू पहिल्यै उच्चारण गरिएको थियो कि म सुत्न सक्दिन। त्यहाँ अर्को थकाउने क्षण थियो: मैले बान्ता सुरु गरें, जुन एक संकेतहरू मध्ये एक हो जुन Cervix अझै पनि प्रकट गर्दछ। तर कन्डिसन धेरै अप्रिय छ।
निन्द्राहीन रातको बावजुद, संकुचन र थकान, प्रक्रिया सुरु भएन: "यदि यो केवल बच्चाको जन्म हो भने, र फेरि लड्ने छैन "
बिहान एक डाक्टरलाई स्पष्ट पार्न डाक्टर खोज्न गयो, म कस्तो अवस्थामा छु। सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा यो छ कि निरीक्षणले म बच्चा जन्माइनँ भनेर देखाउँदछ। ठिक छ, मैले बान्ता को बारे मा भन्न बिर्सिएन। यहाँ डाक्टरलाई सतर्क गरियो र मलाई KTG मा पठाइएको थियो।
मसँग बबल पंचर छ र तेल पानी जारी गर्यो। तिनीहरू उज्यालो भए पछि फर्के, कि म खुशी भएँ: यसको मतलब यो हो कि बच्चाको साथ सबै कुरा राम्रो छ। केवल यहाँ cervix मलाई खुशी पार्न चाहँदैनथ्यो: उनी अझै तंगमा रहेकी थिईन्। मैले बुझें कि यो धेरै राम्रो संकेत र बच्चा जन्माउने छैन सजिलो नहुन सक्छ। अर्को, CTG जडान गर्नु आवश्यक थियो, र यस अध्ययनको बखत पछ्याइयो। झूट बोल्दा जब कठोर संकुचनहरू जान्छन्, यो धेरै गाह्रो हुन्छ, म वास्तवमै सार्न चाहान्छु, यस्तो लाग्यो कि यो उत्तम हुनेछ। मैले कुनै स्पामको साथ एक ड्रपर पनि नियुक्त गरें।
भोग्नु परेको छ, एक असुविधाजनक स्थिति सहन र कतै एक घण्टा मा एक घण्टामा मबाट प्राप्त गर्न को लागी सोधे कि तपाईं उठ्न र हिंड्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ कुनै आपत्ति थिएन, र म उनीसँग एउटा झोला थियो, तर उनीसँग एउटा झोपूर भयो, मैले वार्डको वरिपरि हेरे। फेरि, डाक्टरले हेरे, मलाई हेरी, म अब किन सुतिरहेको छैन भनेर सोधे। निद्रा रहित रातबारे सिकेपछि, एपिसोली एनेस्थेसियाको प्रस्ताव राख्यो। अवश्य पनि, म मात्रै थिएँ!
onn en en engeris विरोध आयो, मलाई अभिनहेय एनेस्थेसिया बनायो र म निर्वारोहमा दुई घण्टा दुई घण्टा थिएँ। तर एउटा पक्ष संवेदनशील भएको छ भने मैले यसबारे गुनासो गरेँ - थप औषधिहरू थपियो, र पूर्ण निरवनामा आए।
- ईरिना, हामी तपाईंलाई एक सुन्दर छोरीको जन्ममा बधाईमा छौं। कृपया मलाई भन्नुहोस्, कुन परिस्थितिहरूमा यो देखा पर्यो। - धन्यवाद। तपाईंलाई थाहा छ, समय बितिसकेको छ, र अब मलाई यो कथा याद आयो।
केहि आश्चर्यजनक चमत्कारको रूपमा मलाई भयो। तर त्यो क्षणमा म र मानिसहरू जो त्यो क्षणमा नजिकै थिए, यो धेरै नै थिएन।
र के भयो कि मैले मेरो तेस्रो बच्चालाई ठीकसँगै मेरा साथीहरूको कारमा, अस्पताल जाने बाटोमा छु। छोरी अहिले नै जन्म भएको थियो जब हाम्रो कारले रिसेप्शन कार्यालयको ढोकामा चलायो।
मेरो प्रेमिकाले आफ्नी छोरीलाई मेरो छातीमा राख्यो र हामीलाई मेरो तल ज्याकेटले कभर गर्नुभयो।
मैले कराइरहेको सुनें र हेरावबाट कतै नभएसम्म म डाक्टर-अत्याचारी, जसले गर्भावस्थाको कारण विभाग-ओस्टेटरिटियनका शब्दहरू, मेरो डाक्टर-ओस्टेटरिटिनियनका शब्दहरू, "ठूलो, ठीकठाक छ।" एक महिला पेयरिटियन संग सँगै, ती हाम्रो कार मा दगुर्न को पहिलो थिए।
- हामीलाई भन्नुहोस् यो कसरी भयो कि तपाईंले यति ढिला गर्नुभयो? गर्भावस्था र जन्म कस्तो थियो? "मैले कुनै सुविधाहरू बिना गर्भावस्थालाई कम गर्थें, योजना अनुसार मैले सबै परीक्षाहरू पार गरें, अध्ययन गरे, नियमित रूपमा मेरो डाक्टरसँगै बोलाए।
अन्तिम परामर्शमा, उसले मलाई कथित बच्चा जन्माउने मिति नियुक्त गर्यो र झगडा गर्न र प्रसारित अस्पतालमा जानको लागि 10 मिनेट।
सबै दिन मैले ठूला ब्रेकहरूको साथ दुर्लभ संकुचन गरें। साँझसम्म, संकुचन अधिक नियमित, तर धेरै छोटो, -0-400 सेकेन्ड भयो।
मैले डाक्टरलाई परामर्श लिएँ र उनले युद्धको तीव्रताको लागि पर्खेर मलाई अब सिफारिस गरे।
मैले भन्नुपर्दछ कि म वास्तवमै अस्पतालहरू मन पराउँदिन र बिल्कुल अस्पतालमा जान चाहन्न।
हामीले यसलाई लिमोडो लियोनिडाविचसँग छलफल ग, ्यौं भने, मलाई अस्पताल वार्डमा अतिरिक्त समयबाट जोगाउन खोज्यो। तथ्यहरू यी तेस्रो वंड्रा पनि बजाइएको थियो।
अधिक वर्णन गर्नुहोस्, सामान्यतया, केहि पनि छैन, हो, मलाई सबै तरिकाले विस्तृत रूपमा याद छैन। 55 Wa को स्थापनामा केन्द्रीय क्लिनिकमा जेमोटोरोजर्सबाट हामीले 400 मिनेटमा डुब्यौं। जब हामी वचनबाट जहाजमा डुब्यौं, पानीबाट बाहिर निस्के, र जब हामी तयार पारिएको हुन्छ, मैले अन्ततः जन्म दिन सुरु गरिसकेको छु। मैले अहिले बुझें, डाक्टरहरूले यसलाई "छिटो प्रसव वेदना" भन्छन्। यो प्राय: यस्तो हुँदैन, तर यो दोहोरिएका महिलाहरूमा हुन्छ। यहाँ, म तिनीहरू मध्ये एक हुन गयो।
- तपाईसँग त्यस्तो गाह्रो परिस्थितिको छेउमा को हुनुहुन्थ्यो? - मेरो राम्रा साथीहरू र छिमेकीहरू, विवाहित जोडी, साशा र लेना।
तिनीहरू डाक्टरहरू छैनन् र औषधिसँग केही गर्न बाँकी छ, तर उनीहरूको समर्थन बिना मसँग के हुन्छ म कल्पना गर्न सक्दिन।
मेरो श्रीमान्लाई यी दिनहरू व्यापार यात्रामा हुनुपर्दछ, र हामी सहमत भयौं कि यदि आवश्यक छ भने, तिनीहरूले मलाई आफ्नो गाडीमा लैजान्थे। म कसरी कृतज्ञ छु वर्णन गर्न गाह्रो छ।
सबै तरिकाले ल्यानले मेरो डाक्टर विदेश लियोडोइडारोविचसँग फोनमा कुरा गरे, उनले आश्वासन दिए र हामीलाई सिफारिस दिए।
पहिले नै क्लिनिकमा, कारमा डाक्टरहरूले तुरुन्तै उनको छोरीलाई जाँच गरे, मलाई कलम विस्तारले नियन्त्रण गर्यो। र हामीलाई मेरी छोरीको वार्डमा लगियो। म धेरै भाग्यशाली थिए।
<< p> - तपाईं, साशा र लेना वास्तविक नायकहरू हुन्। यस अद्भुत कथाको चौथो नायकको नाम के हो र अब यो कस्तो छ? - हामीलाई अरोरोरा छोरी पनि भनिन्छ। उनी ठीक छ, अब ऊ मिठो सुत्छिन्, अन्यथा हामी भएको थिएनौं। प्रसूति अस्पतालमा पेड्रिनिकहरूले एर्गगर मापन मा / / points पोइन्ट राखे। जब मैले यो भनेको थिएँ, म अन्ततः "खाली गरिए"।
- ईरिना, हामी तपाईंलाई अरोना, आफ्ना बच्चाहरू, पति र स्वास्थ्य मित्रहरू चाहान्छौं। धेरै तपाईंको साहस र एक रोचक कथा को लागी धन्यवाद। तपाईंले निरन्तर कठिन कठिनाइहरूको साथ काम गर्नुभएको छ, हाम्रो दिनमा गैर-मानक धेरै भविष्यका आमाहरूका लागि उदाहरण हुनुपर्दछ। - तपाईंलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। र म भविष्यका सबै आमाहरू अधिक दुर्व्यवहार र शक्ति चाहन्छु!
ईरिना र अरोरा जस्ता आश्चर्यजनक कथाहरू पढ्नु आवश्यक छ कि सबैभन्दा प्रभावकारी र बुद्धिमानी डाक्टरलाई सम्झनु पर्छ के सम्झनु आवश्यक छ। एक अस्पष्टता सहित।
र शारीरिक बच्चा जन्माईको इभानआइओको विकासद्वारा प्रोग्राम गरिएको, जहाँ बच्चाको प्रत्येक आवाश्यक भवनको लागि, प्रत्येक हर्मोनमेटिकल झुकाव, सबैको लागि प्रत्येक हर्मोनमेटीय झुकाव - सबैको लागि प्रत्येक हर्मोनमेटीय झुकाव - सबैको लागि प्रत्येक हर्मोनमेटीय झुकाव - सबैको लागि प्रत्येक गुम्बोनिकीय झुकाव हो - सबैको लागि प्रत्येक गुम्बोनिक झुकाव, सबैको लागि प्रत्येक हर्मोमोन मान सकेसम्म आदर्श शुद्धता र कुशलतापूर्वक।
यस्तै आदर्श अनुभवको जन्मले उनीहरूको अगाडि बढ्छ र कुनै हस्तक्षेप आवश्यक पर्दैन। यद्यपि, योग्य चिकित्सा समर्थन बिल्कुल आवश्यक छ यदि यस प्रक्रियामा केहि आदर्शबाट विचलित हुन थाल्छ भने।
हैन कि सबैको व्यावसायिक डाक्टर र सब भन्दा नयाँ नदाज्ञले गर्भावस्था, बच्चाको जन्म र प्रसवय अवधिको सही भविष्यवाणी गर्न सक्दैनन्।
मेरो तेस्रो जेनेरा भित्तामा भयो, र म तिनीहरूलाई सबैभन्दा आध्यात्मिक, न्यानो र उज्यालो भन्न सक्छु। के भने दोस्रो पनि यहाँ थियो र ठूलो पारित भयो, तर त्यस्तो ईमानदारी होइन।
मेरो पहिलो डर ???? यो गर्भावस्था, त्यो एक्लै बन्छे प्रसव वेदनामा। तर यस समय, यस्तो लाग्यो कि मलाई यो लाग्यो कि प्रजातको अस्पतालमा त्यतिखेर नै थिए। र मेरो वरपर फाइनलमा त्यहाँ4जना स्वर्गदूतहरू थिए।
खुट्टामा दुई खुट्टामा टाउकोको पदोन्नतिको लागि अवलोकन गरियो र मेरो कार्यको कारणले नेतृत्व गरिएको थियो। बच्चाहरूको डाक्टरलाई मेरो टाउकोको नजिक सहयोग गरियो, हेम्पथेड गरिएको, हात राखियो।
त्यो क्षणमा म धेरै न्यानो र आरामदायक थिएँ, तपाईं यति नजिक हुनुभयो, लगभग मलाई अँगालो हालेर लगाउँदै थियो, र उनको छोरीलाई मद्दत गर्नुभयो।
जाडो विन्डो बाहिर, यो अन्धकार भैरहेको थियो, र वार्डमा यो सहज र प्रकाश चम्किरहेको थियो, तर एक रमाईलो तापक्रम।
⠀ ⠀ सबैले झगडाको साथ बिस्तारै सुरू गरे, तर स्वागततः उनीहरूलाई धमिलो पार्ने कुरा भनियो।
PATER हेडमा लिनुभयो, मेरो अवस्थालाई बताइन्, हामीले उनीसँग छलफल गर्यौं र बच्चा जन्माउने योजना स्वीकार्यौं, मसँग घरमा नास्तामा छैन। Cervical को तयारी।
-4--4 घण्टाको क्याथेटरको - 4-4- hours घण्टा, र अर्को clage किट्स को बुलबुले प्रकट भयो, लामो, लामो, पूजा, तर आराधना।
इमान्दारीपूर्वक, यो प्रसवको सबैभन्दा भयानक क्षण थियो, उहाँ एक शब्द पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ - "ADOK"।
म रुनु थाले, सामान्यतया यस्तै भावनाहरू or वा पूर्ण रूपमा खुला भावनामा पार हुन्छ, तर यो समय4मात्र थियो कि म उभिन सक्दिन। ।
डाक्टरले लडाई र शक्ति अनुमान गरे, र यो एनेस्थेटिकको बारेमा निर्णय गरियो, किनकि संकुचानमा परेको थियो, तर घाँटी पूर्ण रूपमा थिएन।
सबैभन्दा कठिन कुरा एक गोल भएको पछाडि बस्नु थियो र सार्न सकेन, जबकि तिनीहरूले एनेस्थेसिया राख्थे, जसमा कडा संकुचन भयो।
तर त्यसपछि एनेस्थेनिसले काम गरेको हुन्छ, एक चमत्कार भयो! ⠀ मलाई थाहा छैन किन कोही डाक्टरसँग भाग्यशाली छैन।
पहिलो दुई जन्म दु: ख राहत चाहिएको थिएन, र यी त्यस्ता थिए। सुरुमा म निराश थिएँ कि म आफैंलाई आराम दिन सक्दिन कि मैले प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु पर्छ। तर मँ बुझें: शायद मैले बुझें कि मेरी छोरी, म मेरी आमाको लागि न्यूनतम सम्बन्धहरू देखा पर्न चाहान्थें।
⠀ हामी SVETLANNA छोरी भनिन्छ, यद्यपि यो नाम हाम्रो सूचीमा थिएन। हुनसक्छ किनभने मसंग सबै समय मेरो साथ थियो र मेरी छोरीले साभेटलाना भनिन्छ?! ⠀ dotorner र बिरामी बिरामी लाग्यो।
मैले अघिल्लो जन्महरूको बारेमा प्रश्न र कथाहरूको साथ छोएँ। ⠀ यस प्रकारले, म मेरो टाउको बन्द गर्न सकिन र मलाई आराम गर्न सकिनँ, तर तिनीहरू सफल थिए।
जे भए पनि, तीनवटा कुलका सब भन्दा सफलता र सबै मात्र अस्पतालका कर्मचारीलाई मात्र धन्यवाद दिइन्छ।
दया, संवेदनशीलता र धैर्यको रूपमा - यो सामान्यतया सबै डाक्टरहरूमा अन्तर्निहित - डे डिसेम्बर -2020।
⠀ र crotch को बारे मा केहि शब्दहरू: डाक्टरहरूले यसलाई सुरक्षित रूपमा जोगाउन सफल भए, एकल ब्रेक बिना! म स्तब्ध भएकी छु, र यो पहिलो बच्चा जन्म पछि हो जुन मैले यति धेरै तोडें कि म सामान्य एनेस्थेसिया अन्तर्गत चल्दै थिएँ।
⠀ ⠀, यी तीनवटा कुलबाट सब भन्दा आध्यात्मिक, उज्यालो र न्यानो बच्चा हुन्।
राज्य क्लिनिकल अस्पताल नं नेपाल क्लिनिकल अस्पताल नम्बर2"ओरेबर्गग्रा र ओरेबर्गर्ग क्षेत्रको एक सबैभन्दा पुरानो उपचारका लागि चिकित्सा संस्था हो।